ပျဉ်းမနားမြို့ ဘုန်းကြီး‌ကျောင်း က အာဏာရှင်များ ကိုးကွယ် ထုလုပ်ထားတဲ့ ဆင်းတုတွေဟာ ညာတင်ကုဋ် ဟုတ်ပါလား…? ညာတင်ကုဋ်ဆိုတာဘာလဲ…. ? – Burmese Online News
ဘု ရားရှင် သည် သင်္ကန်းတော် ဝတ်ဆင်ရာ ၌..” ဧကသီ( ကိုယ်ရုံ ) သင်္ကန်း ” ကို ” လက်ဝဲတစ်ဖက် ပခုံးထက် ” ၌ တင် ၍လည်းကောင်း…” သင်းပိုင် သင်္ကန်း ” ကို ခန္ဓာအချက်” ခါး အထက် ” ၌ လည်းကောင်း…”ဒုကုဋ်(နှ စ်ထပ်သင်္ကန်း )” ကို ” ပခုံးထက် ” ၌ လည်းကောင်း …စနစ်တကျ ဝတ်ဆင် တော်မူမြဲ ဖြစ်၏။ ရှေးရှေး ဘုရား ရဟန္တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါများ လည်း ထိုကဲ့ သို့ပင် ဝတ်ရုံ တော်မူကြ သည် ။ လက်ယာဘက် ပခုံး ၌ သင်္ကန်းတင် သည် ဟု ထုံးစံ မရှိချေ..၊
သူရရှိသော ကြေးမည်း(ခြစ်ပိတ်) ဆိုသည် မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်း လောကသားများ အသည်းအသန် လွှဖြင့်တိုက်ရှာဖွေနေသောရှေးဟောင်း မြန်မာ့အလေးတလုံး မဟုတ်ပါ။ အရောင်အဆင်း မည်းအိစိုပြေလှသော ဉာဏ်တော်သေးသေး ဆင်းတုတော်ငယ်တခုသာဖြစ် ပါသည်။ ဆင်းတု အောက်ခြေကို ခပ်နာနာ အစင်းရာ ထင်အောင်တိုက်ကြည့်လေက မိနစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းပြန်ပြည့်လေ ၏။ နာမည် အတန်အသင့်ရနေသောပေ့ခ်ျနှင့် ဂရုဖောင်ဒါတဦးလည်းဖြစ် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတယောက်လည်းဖြစ်သော ဖရန့်လစ် မှ သူငယ်ချင်းတယောက်သည် ငယ်စဉ်အခါက ကြေးမည်း(ခြစ်ပိတ်)ကို ဆော့ကစားဖူးကြောင်း သိရ၏ ။
သူပြောသော ကြေးမည်း အရုပ်မှာ ဘုရားဆင်းတု မဟုတ်ဘဲ အမည်းရောင် ဖားရုပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ခြစ်လိုက် ၍ပြန်ပိတ်သွားပုံ တို့မှာ ကိုမြင့်သိန်းရရှိသောကြေးမည်းနှင့် တထပ်တည်း တူညီလေ သည်။ ပြန်ပိတ်တာလည်း အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ အရုပ်များ အတွင်း မှ ပြဒါးသည် အရှိန်အဟုန် အင်အားကြီးလှသော မီးနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ကစားခြင်းခံရသောကြောင့်ဓါတ်ပြောင်းကာ ဆန့်ကျင်တွန်းကန်သဖြင့်ပြန်ပြန်ပိတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ၏။အဆိုပါ ကြေးမည်း (ခြစ်ပိတ်) သည်လည်း အဂ္ဂိရပ် လမ်းစဉ် ၏ လမ်းခုလပ်သာ ရှိသေးပြီး ထပ်မံမီးနေရန် လိုအပ်သေးကြောင်း ဆိုလေသည် ။
အကြောင်း မှာ အဂ္ဂိရပ်သမားတယောက် အတွက်အတော်အသင့် ခရီးရောက်နိုင်သော ဓါတ်လုံး တလုံး ရရှိရန်ပင် လူ့သက်တမ်းကုန်သည် အထိမလွယ်ကူသောကြောင့်ပင်။ အများစု၏ ဓါတ်လုံးတို့သည် ဘာတခုမှ မဖြစ်မြောက်ဘဲပြဒါးခဲ သံခဲ အစရှိသောအနေဖြင့်သာ ခရီးလည်းဆုံး လူလည်းဆုံးကြတာများသောကြောင့်ပင် ။ထို့ကြောင့်လည်းထိုထိုသော အဂ္ဂိရပ်သမားတို့ သည်မိမိတို့ဓါတ်လုံး ကို ကြွားလုံးထုတ် လိမ်လည်မှု တို့သာ များပြားတော့၏။ ကုန်းဘောင်ခေတ် စာဆိုတော်စလေဦးပုညကပင် “မဖြစ်ရင်နေ ဖြစ်ရင်ကြေလူလိမ် အတတ် အဂ္ဂိရပ် ” ဟူ၍အဂ္ဂိရပ်လောက တွင် လူလိမ်တို့ကျင်လည်ကြောင်း သတိပေး စပ်ဆိုခဲ့လေ၏။
လူသားတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဆိုးဆုံးကပ်ရောဂါကြီး (၁၀) ခု
အတန်းထဲက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ကြောင့် မိသားစုတစ်စုလုံးရင်နာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နောင်တ
ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်သော တရုတ်အစိုးရ ၏လိမ်ညာ မူများ အကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံ ဥပဒေပညာ ပါမောက္ခတဦး အဖမ်းခံရ